नेपाल प्रहरीले छोराको गल्ती भन्दै आमालाई कु’टे, प्रहरीकै कु’टाईबाट रिक्साचालक अस्पतालमा::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
नेपाल प्रहरीले छोराको गल्ती भन्दै आमालाई कु’टे, प्रहरीकै कु’टाईबाट रिक्साचालक अस्पतालमा
आइत, माघ २६, २०७६
न्यूज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ४९३ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । निम्न विषयमा रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ :
१. प्रहरीको बढ्दो ज्यादती, हाकिमहरु बोल्नै मान्दैनन् – सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर १ की ज्ञानी तामाङकी १४ वर्षीय छोरा माघ ६ गतेबाट बेपत्ता भए । उनले माघ ८ गते महानगरीय प्रहरी प्रभाग बूढानीलकण्ठमा खोज–तलासका लागि निवेदन दिइन् । त्यसको १० दिनपछि माघ १८ गते प्रहरी चौकीबाट उनलाई फोन गरेर बोलाइयो ।
छोराको बारेमा केही पत्ता लागेर बोलाइएको होला भन्दै उनी हतार–हतार प्रहरी चौकी पुगिन् । तर, उनी त्यहाँ पुग्दा थाहा भयो कि कुरो अर्कै रहेछ ।
उनका छोरा पढ्ने गरेको जनजागृत माध्यामिक विद्यालयबाट ६ कक्षामा पढ्ने एक किशोरी पनि सोही दिनदेखि हराएकी रहेछन् । सोही किशोरीको बारेमा उनीसँग सोधपुछ गर्न उनलाई बोलाइएको रहेछ ।
तर, प्रहरीले सोधपुछ गर्ने नाममा उनलाई अमानवीय रुपमा निर्घात कुटपिट गरेको उनको आरोप छ । ती किशोरीलाई ज्ञानीका छोराले नै भगाएको र यो कुरा ज्ञानीलाई थाहा भएको भन्दै दुई जना महिला प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरेका उनको भनाइ छ ।
प्रहरीले कुटेको गुनासो लिएर हाम्रो कार्यालय आएकी ज्ञानीको शरीरमा निल–डामहरु प्रस्ट नै देखिन्छ । यतिमात्र होइन, उनको ढाड, तिघ्रा तथा शरीरका संवेदनशील अंगमा समेत निल डामहरु छन् ।
ज्ञानी तामाङको हराएका छोराले किशोरीलाई भगाएको कुरा प्रहरीले हालसम्म प्रमाणित गर्न सकेको छैन । छोराले गल्ती नै गरेको भएपनि आमालाई कुट्ने कुरा कुनै हालतमा कानून सम्बत् थिएन ।
उनको गुनासो सुनेपछि हाम्रो टिम ज्ञानी तामाङलाई लिएर महानगरीय प्रहरी प्रभाग बूढानीलकण्ठ पुग्यो । त्यहाँ ती महिलाले हामीलाई आफू कुटिएको ठाउँ देखाउँदै थिइन्, र एक प्रहरीमाथि औंलाले ईसारा गर्दै आफूलाई कुट्न आदेश दिने प्रहरी तीनै भएको बताउँदै थिइन् ।
महिलाले ती प्रहरीलाई कुट्न आदेश दिने तपाई नै हो भनेर औँला ठड्याईरहँदा उनले होइन भन्न सकेनन् । बरु ‘सर आउनुभएको छ । उतै कुरा गर्नुस्’ भने ।
ती महिलाले आफू कुटिएको बताएको कोठामा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको थियो । त्यहाँका प्रहरी निरीक्षक भुपेन्द्र गिरीलाई फुटेजबारे सोध्दा क्यमेरा जडान गरिएको भएपनि सञ्चालनमा नरहेको भन्दै यसरी पन्छिए ।
प्रहरी कार्यलयभित्रकै सीसी क्यामेरा सञ्चालनमा नरहेको जवाफ पाएपछि हामीले सीसीटिभी फुटेज लुकाउन खोजेको शंका नगर्न सकेनौं । महिलाले उक्त प्रहरीले नै कुटेको हो भन्दै निल डाम देखाउनु, कुट्न आदेश दिने प्रहरी उहाँ नै हो भनेर औँला ठड्याउँदा ती प्रहरी विषयबाट पञ्छिन खोज्नु र सीसीटिभी क्यामेरा समेत सञ्चालनमा नरहेको बताउनुले शंका गर्ने ठाउँ निकै छोडेको छ ।
त्यस्तै बुटवलमा रिक्सा चलाएर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दै आएका बुटवलका भुवन सिङ्गजालीलाई ड्यूटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरी र जनपथका प्रहरी जवानले कुटपिट गरेर घाइते बनाएका छन् ।
बुटवलको चौराहामा आफ्ना प्यासेन्जर पर्खेर बसेका उनलाई ट्राफिक जाम गराएको भन्दै उनीसँग लाइसेन्स र ब्लूबुक मागेका थिए । तर, लाइसेन्स र ब्लूबुक दिन नपाउदै उनलाई ट्राफिक प्रहरीले बाहिर घिसारे, लात्ती र लठ्ठीले कुटपिट गरे ।
निर्घात कुटपिटपछि उनलाई वडा प्रहरी कार्यालय रामनगर लगिएको थियो । बेहोस् हुने अवस्थामा पुगेपछि उनलाई प्रादेशिक अस्पताल लुम्बिनीमा पु¥याएर उपचारको लागि भर्ना गरिएको छ ।
घाइते भुवन सिङ्गजालीको उपचार आरोपित प्रहरीले गरिदिने सहमति भएको छ ।
२. जनकपुरको राघोबाबा स्कुलमा पुगे मेयर, उत्कृष्ट बनाउने प्रतिबद्धता- धनुषाको नगराइन नगरपालिका २ स्थित राघोबाबा प्राथमिक विद्यालयका विषयमा हामीले रिपोर्टिङ गरेपछि मेयरले अनुगमन गरेका छन् ।
विद्यालयका अधिकांश शिक्षक अनुपस्थित, डेक्स बेञ्चको अभाव, विद्यालयको कक्षा कोठाभित्र पशु चौपाए बाँध्ने गरेको विषयमा हामीले रिपोर्ट प्रशारण गरेका थियौं ।
यस बिषयमा लाइभमा कुरा गर्दै नगराइन नगरपालिका मेयर परमेश्वर यादवले आफूलाई विद्यालयको उक्त अवस्था बारे जानकारी नभएकाले अुनगमन गर्ने बताएका थिए ।
३. जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकामा पुल बनाउने ठेकेदार तीन वर्षदेखि बेपत्ता – जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिका वडा नम्बर २ रनुखानामा काठको पुल बनाएर खोला वारपार गर्ने गरिन्छ ।
हिउँदको समयमा काठको पुलबाट जेनतेन वारपार गरिएपनि बर्खायाममा बाढीले बगाएर कहाँ पु¥याउने हो, थाहै हुँदैन । खोलामा पक्की पुल नभएपछि स्थानीयहरु काठको पुलबाट जोखिम मोलेरै भएपनि खोला तर्न बाध्य छन् ।
खोलाको छेउमा एउटा ठिङ्ग ठडिएको पिल्लर देखिन्छ । त्यो पिल्लर पक्की पुलको पिल्लर हो । २०७३ सालदेखि उक्त पिल्लर त्यसरीनै एक्लै ठडिएर बसेको छ ।
इजरायलमा कोरोनाले गर्दा २० जनाको मृत्यु , संक्रमित बिरामी बढेर ५ हजार ३५८ पुग्यो, २२४ जना पुरै निको भए !
कोरोनासँगको लडाईमा नेपमेड्सको साथ – स्मार्ट बनौ, प्रबिधि र उपलब्ध सेवाको प्रयोग गर्ने बानीको बिकास गरौ ।
इजरायलमा कोरोनाभाइरसको कारण १५ को निधन, कोरोनासंक्रमित बिरामी ४ हजार २४७ का’ट्यो
ISRAEL UPDATE कोरोनाबाट १२ जनाको मृत्यु, संक्रमितको संख्या ३ हजार ४६० नाघ्यो, उपचारपछि ८९ जना कोरोनाबाट ठिक
इजरायल र साइप्रसमा रहेका नेपालीहरुलाई इमर्जेन्सी फारम भर्न नेपाली राजदूतावासको जरुरि सूचना
लक डाउन प्रभावित विपन्न परिवारका लागि व्यबशायि खड्काले गरे ५० हजार सहयोग